जिम्बावेसँग हारको ३ टर्निङ प्वाइन्ट | Hamro Khelkud
जिम्बावेसँग हारको ३ टर्निङ प्वाइन्ट
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालले पहिलो खेलमा टेष्ट टोली जिम्बावेलाई बलियो चुनौती दियो । एक समय जित नजिक पुगेको नेपाल अन्त्यमा चुक्न पुग्यो । नेपाल जिम्बावेसँग ५ विकेटले पराजित हुन पुग्यो । १ सय ३३ रनको लक्ष्य जिम्बावेले १८.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो ।
टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १ सय ३२ रन बनाएको थियो। सामान्य लक्ष्य पछ्याएको जिम्बावेलाई लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले प्रमुख तीन ब्याट्सम्यानलाई डक आउट गरेपछि समस्यामा परेको थियो । एक समय १० ओभरमा ६४-५ को कमजोर अवस्थामा पुगेको जिम्बावेलाई छैटौं विकेटका लागि बर्ल र मुतुम्बामीले ६९ रनको अविजित साझेदारी गर्दै हार टारेका थिए । जित नजिक पुगेको नेपाल जिम्बावेसँग हार्नुका टनिङ प्वाइन्टहरु यस प्रकार रहे ।
३. सेट ब्याट्सम्यान पारस आउट हुनु
टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले राम्रो योगफल बनाउने आशा गरिएको थियो । ओपनर इशान पाण्डेलाई नेपालले दोस्रो ओभरको अन्तिम बलमा ४ रनमा गुमाएको थियो । नेपालको इनिङ कप्तान पारसमा बढि निर्भर थियो । यो खेल मात्र होइन हेरक खेल पारसमानै बढि निर्भर रहने गर्दछ । त्यसैले धेरैले पारसलाई ‘वान म्यान आर्मी’ अर्थात् एकल योद्धा समेत भन्ने गर्दछन् । पारसले रन पनि जोडी रहेका थिए ।
रायन बर्लको आठौं ओभरको तेस्रो बलमा कप्तान पारस वाउन्ड्रीको आसामा गलत सट खेल्दै १८ रनमा क्याच आउट हुन पुगे । पारस आउट हुनु नेपाललाई ठूलो घक्का मात्र थिएन खेलको टनिङ प्वाइन्ट समेत बन्यो । पारस आउट भएसँगै अन्य ब्याट्सम्यानले रन जोड्न संघर्ष गर्नु पर्यो । उता दीपेन्द्रले अर्कोतर्फबाट रन जोडी रहेका थिए । सोमपालले अन्त्यमा ३ छक्का सहित २५ रन जोडे । पारस लामो समय सम्म क्रिज टिकेको भए बलियो योगफल बन्न सक्थ्यो ।
२. डेथ ओभरमा दीपेन्द्र र कुशललाई बलिङ
सामान्य लक्ष्य पछ्याएको जिम्बावे अप्रत्यासित हारको नजिक थियो । लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने शीर्षक्रममा तीन ब्याट्सम्यान रेजिस चकवा, तिनोटेन्डा मुताम्बोडजी र कप्तान सन विलियम्सलाई डक आउट गराएपछि जिम्बावे संकटमा पर्यो । १४ ओभर सम्म नेपाल हाबी बनेको थियो । तर कप्तान पारस खड्काले सबैलाई आश्चर्य पार्दै १५ ओभरमा दीपेन्द्रलाई बलिङ ल्याए ।
ठूला सटको पर्खाईमा रहेका जिम्बाबेका मुतुम्बामीले तेस्रो र चौथो बलमा लगातार छक्का प्रहार गरेपछि खेलले नयाँ मोड लिएको थियो । दुई छक्कासँगै जिम्बावे माथिको दवाव र रन रेट घटेको थियो । अन्तिम २४ बलमा २७ रन चाहिएको अवस्थामा कप्तान पारसले सोमपाल कामी र करण केसीलाई रोकेर कुशल मल्ललाई बलिङ दिए । जुन घातक बन्यो । यस ओभरमा कुशलले ३ छक्का र १ चौका सहित २३ रन खर्चिएपछि नेपालको जितको सम्भावना सकिएको थियो । जवकी सोमपालको १ र करणको २ ओभर बाकी हुदा हुदै पनि कुशल र दीपेन्द्रलाई बलिङमा ल्याउनु नेपालले हार्नुको एक टर्निङ प्वाइन्ट बन्न पुग्यो ।
१. अभिनाशलाई बलिङमा ढिला ल्याउनु
खेलको अर्को महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्ट भनेको तीब्र गतिका बलर अभिनाश बोहोरालाई बलिङमा ढिला ल्याउनु हो । नेपालले १० औं ओभरमा पाँचौ सफलता हात पारेको थियो । तर बर्ल र मुतुम्बामीले राम्रो साझेदारी गर्दै लगेका थिए । सामान्य लक्ष्यमा जिम्बावेलाई रोक्न नेपालले उक्त साझेदारी समयमै तोड्नुपर्ने थियो । नेपालका लागि टि-२० स्पेलिष्ट अभिनाशलाई कप्तान पारसले १६ औं ओभरमा ल्याएका थिए ।
त्यस अघि १५ औं ओभरमा दीपेन्द्रले २ छक्का खान पुगेका थिए । योर्कर फ्क्यान सिपालु अभिनाशलाई १३ ओभरपछि ल्याएको भए खेलले नयाँ मोड लिन सक्थ्यो । अभिनाशले २ ओभरमा ११ रन मात्र खर्चेका थिए । सामान्य लक्ष्य पनि अन्तिम ओभर सम्म जान्छ की भन्ने आशाले अभिनाशलाई ढिला ल्याउनु नेपालले हार्नुको अर्को टनिङ प्वाइन्ट बन्यो ।